Howlgalo lagu qabqabtay Dad u badan DHalinyaro oo Xalay Muqdisho laga fuliyay – SBC
Howlgalo lagu qabqabtay Dad u badan DHalinyaro oo Xalay Muqdisho laga fuliyay
Ciidamada Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa ka Fuliyay Habeen nimadii xalay Howlgalo dad badan lagu soo qabqabtay Gudaha xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho Xarunta dalka .
Ciidamadan ayaa xalay bandow geliyay dhaq dhaqaaqyadii ganacsiga, gaadiidka iyo isku socodka dadka gudaha xaafado ay ka mid yahay Xaafada wadajir ee magaaladaasi Muqdisho iyagoo baaritaan xoogleh oo ay fuliyeen ku soo qabqabtay dad ay ku tuuhmeen in ay ka qeyb yihiin kuwa qal qalka amaan dari ka wada gudaha Magaalada.
Dadkan la qabqabtay oo u badan dhalinyaro ayaa waxaan la xaqiijin karin tiradooda rasmiga ah, waxaana ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah in ciidamadu ku ka xeysteen ka dib qab qabasho ay ku sameeyeen gaadiidkooda maxaabiista lagu qaado iyagoo ula dhaqaaxay xarumaha dembi baarista ee ay ku leeyihiin magaalada.
Inta badan markii howlgalo ceynkan oo kale ah laga fulinayo magaalada Muqdisho waxaa la qabqabtaa oo tuhunka faraha badan uu galaa waa dhalinyarada, iyagoo loo kaxeeyo dembi baaris, hadii dembi lagu helo xabsiga ayaa loo gudbiyaa hadiisa aan lagu helin waa la siidaayaa, sidaasi waxaa tiri gabadh ka mid ah ganacsatada Xaafada Buulo xuubey oo ka tirsan Degmada Wadajir.
Howlgalada lagu sugayo amaanka ayaa ah kuwo caadi ka ah Muqdisho, waxaana markii la dareemo mar qura istaaga dhaq dhaqaaqyada dadka iyo ganacsiga hadba deegaanka ay howlgalka ka sameynayaan ciidanka.